Baarlmaanka Puntland oo doortay Gudoomiye ku meel gaar ah – Bandhiga
Baarlmaanka Puntland oo doortay Gudoomiye ku meel gaar ah
Mudanayaasha golaha wakiilada cusub ee Puntland ee xalay lagu dhawaaqay ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay xaruntooda golaha wakiilada ee magaalada Garoowe.
Munaasabada dhaarinta xildhibaanada waxaa ku sugnaa masuuliyiinta gudiga xalinta khiLaafaadka golaha wakiilada,qaar kamid ah culimada Puntland,gudiga xuquuqul insaanka Puntland iyo gudiga amniga doorashooyinka iyadoona la bilaabay in la dhaariyo xildhibaanada.
Markii ay soo idlaatay dhaarta xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa gudoomiye kumeel-gaar ah wxa ay u doortay Xildhibaan Xuseen Xaaji Yaasiin oo ah Xildhibaanka ugu da’da weyn golaha, waxaana Xildhibaankan uu xilka wareejin doona marka la doorto Gudoomiyaha rasmiga ah ee Golaha Wakiilada Puntland.
Golaha wakiilada Puntland ayaa sida qorshuhu uu yahay hadda laga sugayaa in ay magacaabaan Guddiga Qabanqaabada Doorashada Puntland kaas oo la faliyo in ay ka shaqeeyaan qabsoomida doorashada gudoonka Baarlamaanka,madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Si kastaba Baarlamaankan cusub ee 66-da xubnood ka kooban ayaa noqonaya Baarlamaankii 5-aad oo ay yeelato dowlada Puntland ee Soomaaliyeed,waxaana si aad ah xildhibaanadan uga dhex muuqda dhalinyaro da’yar.